Somaliland Iyo Kenya oo Shaaciyey Inay Yeelanayaan Iskaashi Ganacsi oo Adag |
Somaliland Iyo Kenya oo Shaaciyey Inay Yeelanayaan Iskaashi Ganacsi oo Adag
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Magaalada Nairobi, ayaa baahiyey in Dowladaha Somaliland iyo Kenya ay ka wada shaqeynayaansidii ay u yeelan lahaayeen cilaaqaad adag oo dhinaca ganacsiga ah.
Warka Wargeyska Daily Nation uu daabacay maanta oo aysoo xigatay Wakaallada Wararka Somaliland ee SOLNA, waxa lagu sheegay in labada dal ay dhiirigelinayaan maalgashiga xudduudaha iskaga gudba, warbixintaasina waxay u qornayd sidan:-
Wasiirka Ganacsiga iyo Wershadaha Kenya Mr. Peter Munya ayaakulan xafiiskiisa kula yeeshay Khamiistii danjiraha Somaliland u fadhiya Kenya, Baashe Cawil Cumar, waxaanaylabada dhinacfalanqeeyeen fursadaha maalgashi ee labada dalbaugu jirto danaha dhaqaale.
Waxa kaloo Kenya iyo Somaliland ay sheegeen inuusocdo qorshe lagu bilaabayo duulimaadyo toos ah oo iskaga goosha Hargeysa iyo Nairobi. Waxa kaloo ay intaas ku dareen in himiladda labada Waddan ay ka mid tahay inay iskaashi yeeshaan dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Mombasa.
Wasiirka Ganacsiga iyo Wershadaha Kenya, Peter Munyawuxuutilmaamay in dalkiisa iyo Somaliland ay wax badan wada qabsan karaan, waxaanu xusay inay Somaliland u soo bandhigtay maalgshadeyaasha Kenya fursado badan oo maalgashi.
Danjiraha Somaliland u fadhiya Kenya, Baashe Cawil Cumar ayaa sheegay inay Wasiirka Ganacsiga Kenya isla soo qaadeen sidoo loo taabogelin lahaa iskaashiga masaalixdu ugu jirto labada dowladood.
Safiir Baashe Cawil wuxuu caddeeyeyin Somaliland ay iskaashiga ganacsi la leedahay dalalka Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya, isla markaana ayalbaabada u furayaan ganacsatada reer Kiiniya.
Wasiirka Ganacsiga Kenya, ayaa hore booqasho ugu yimid Somaliland xiligii uu ahaa Badhasaabka Gobolka Meru, waxaanu suuq u qalqaalinayeysidii Jaadka Miirooga loo keeni lahaa Somaliland.